Darawal Mooto Bajaaj oo lagu dilay Magaalada Muqdisho - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Darawal Mooto Bajaaj oo lagu dilay Magaalada Muqdisho
Darawalkaan Mooto Bajaajlaha ahaa ayaa waxaa lagu dilay waddada Afisyooni gaar ahaan agagaarka Dugsiga 21 October ee degmada Waaberi ee Magaalada Muqdisho.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in dilka uu yimid, kaddib markii Nin ku labisnaa Dareeska Ciidamada oo watay Mootada nooca laba Lugoodleyda ah uu rasaas la dhacay, isagoona isla goobta ku ruux baxay.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in wadaha Mooto Bajaajta uu waday jaad ( qaad) isla markaana dilka kaddib qaadkii laga qaatay.
Dadweyne Farabadan ayaa tegay halka uu dilka ka dhacay, iyaga oo ku xoomay meydka Darawalka Bajaajlaha ah ee la dilay, waxaana goobta ka baxsaday Askarigii dilka geystay.
Magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca dilal ay Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda Soomaaliya u geystaan wadayaasha Mooto Bajaajta.
Previous articleXasan Sheekh oo sheegay inay cadeymo u hayaan Xubno ka tirsan NISA oo ku jira Guddiyada doorashooyinka
Next articleDHAGEYSO:-Warka Duhur ee Radio Risaala 22-11-2020